छैठौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस - ‘समृद्धिका लागि विज्ञान–संस्कृति’ | Hamro Patro
०१ : ४१
देशभरका ४९ ठूला कारखानामध्ये ६१ प्रतिशतले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान इकाइ व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बाँकी ३९ प्रतिशतमा अनुसन्धान इकाइ छैन वा भेटिन्न। यो हिसाबमा नेपालको औद्योगिक अनुसन्धानको बजार अपेक्षाकृत शक्तिशाली र व्यापक हुनपर्ने पनि लाग्दो हो, लाग्छ।
विज्ञान सिद्धान्तसहितको यन्त्र हो । यसले मानिसको दैनिक जीवन सरल बनाइरहेको हुन्छ । तर संस्कृति जीवन हो । यसले मानिस र समाजलाई जीवन्त तुल्याइरहेको हुन्छ । यसकारण मुलुकको समृद्धिका लागि विज्ञान र संस्कृति साथ साथ लैजान जरुरी छ । पूर्खाले आज्र्याको धरोहर मात्रै होइन मौलिक विज्ञान, प्रविधि र संस्कृति बचाईराख्न आवश्यक छ । यसैकारण हामी ‘समृद्धिका लागि विज्ञान–संस्कृति’बारे युवा पुस्ता जानकार हुन जरुरी छ भन्दछौं ।
संस्कृति मानिसलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने जीवित कला हो । आधारभूत शिक्षाले दिन नसकेका कतिपय प्रकृतिप्रदत्त शिक्षण विधि संस्कृतिले सिकाइरहेको हुन्छ । संस्कृतिभित्रको विज्ञानको पाटो वा वैज्ञानिकता केलाउन नसक्नु अलग कुरा हो । आधुनिक विज्ञानले प्राविधिक पाटोलाई इंगित गराइरहेको हुन्छ । विज्ञानले मानिसलाई उपकरण वा यन्त्रजनित त बनाउला संस्कृतिले बराबर मूल्य र पहिचान दिन चाँहि सक्दैन । अतः हाम्रो संस्कृतिसापेक्ष मूल्य र पहिचान खोज्न र त्यसका लागि भूमिका निर्वाह गर्नु यो अभियानको एउटा अंश हो ।
कति छ लगानी ?
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, युनेस्कोका अनुसार नेपालले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.३ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गरेको उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार दश लाख मानिसमा नगन्य शून्य मानिस अनुसन्धानकर्ता छन् । यद्यपी ९२ प्रतिशत पुरुष र ८ प्रतिशत महिला अनुसन्धानकर्मी उल्लेख छन् । अब यो अनुसन्धान कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि हुन्छ त्यो अर्को बहसको विषय हो ।
नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्टले वि.सं.०६६÷०६७ मा गरेको विज्ञान र प्रविधिको अवस्था सर्भेक्षणअनुसार नेपाल सरकारले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ० दशमलव ३८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । विज्ञहरू यसलाई १ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिदै आएका छन् ।
उपलब्धीका फेहरिस्त माग्ने हो भने सरकारी अधिकारीहरुले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध, जनशक्ति उत्पादन (पीएचडी) लगायतले अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा टेवा पुगेको बताउँदै आएका छन् । सन् २०१३÷१४ सम्म त्रिविले ६ लाख ४ हजार ४ सय ३७ जना विद्यार्थी विभिन्न शैक्षिक तहमा सामेल भएको नास्टको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नास्टले वि सं ०६६÷०६७ मा गरेको विज्ञान र प्रविधिको अवस्था सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा ३ सय ३० वटा वैज्ञानिक संस्था छन् । यसमध्ये १ सय ४४ सरकारी, ४४ वटा उच्च शैक्षिक, २३ नीजि तथा गैरनाफामूलक सस्था रहेछन् । बाँकी ३ वटा नीजि र ३ वटा अन्य भएको उल्लेख छ । तर विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा हाम्रो हैसियत र स्थान कहाँ छ ? सम्भवतः यो प्रश्नले सबैलाई पोल्छ । पोल्नैपर्छ ।
खानीको उत्खनन गरौं । अनुसन्धाननिर्देशित बजार, उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहित गरौं । विज्ञान प्रविधिमा थप रोजगारीको सृजना गरौं ।